Casharbarka Sawirka: Sida Loola Sameeyo animations Sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | dhowr
Maantana waxaan kuu keenay fudeydkan hadana anfacaya tutorial halkaas oo aad ku baran karto abuurista Flash animations, adoo isticmaalaya kaliya muujiye loogu talagalay Ku muujiye waa sawir gacmeed iyo qorshe naqshad kaas oo iska leh sida oo kale Photoshop barnaamijyada Adobe uu la shaqeynayay, iyo mid ka mid ah kuwii shirkadda u horseeday inay noqoto heerka ay ku taalo warshadaha sawirada maanta.
Suite-ka 'Adobe Suite' waa ka sii ballaadhan yahay wuxuuna noo keenayaa codsiyo cusub oo ku saabsan laamaha cusub ee abuurista heerarka sanado ka hor aan kaliya ku riyoon karno, barnaamijyo u heellan abuuritaanka foomam loogu talagalay tifaftireyaasha maqalka iyo muuqaalka ah. Barnaamijyada Adobe badanaa waxay dhiirrigeliyaan is-dhexgalka noocyada kala duwan ee qolka keeno, oo ay ku jiraan, tusaale ahaan, qalabyada midba midka kale, ama u wareejinta astaamaha barnaamijyada kale. Maanta muunad ahaan tan waxaan ku tusinaynaa sida loo sameeyo mid fudud animation con muujiye una dhoofi Flash. Maanta waxaan kuu keenayaa, Casharbarka Sawirka : Sida loo sameeyo animations con muujiye.
Fur dukumenti cusub
Waxaan u sameyn doonnaa animation shabakada gudaha Flash (Jabbuuti), si kastaba ha noqotee waxaan ku abuuri doonnaa Adobe Illustrator. Si aan u bilowno waxaan fureynaa dukumiinti cusub, oo ku socda wadada Dukumiinti-Cusub waxaanan heli doonnaa sanduuqa wadahadalka oo leh menu, halkaas oo aan dhigayno magaca oo aan hubinayno in astaanta aan dooranay ay tahay Shabakadda.
Aynu ku faraxno digaaggan
Horeba dukumiintiga cusub, waxaan bilaabi doonnaa inaan ka shaqeyno. Tan awgeed animation Waxaan ka xushay sawir vectorized ah oo aan ka soo dejiyey internetka, bog aan kaga hadalnay qoraal hore,Freepik, sawir bilaash ah iyo mashiinka raadinta dulinka, oo xoogaa waan waafajiyay. Waxaan tagnaa daaqadda lakabyada oo waxaan si sax ah ugu magacawnaa. Aad ayey muhiim u tahay inaad nidaamiso lakabyada laga bilaabo bilowga.Waxaan u magacaabi doonnaa sida Pollo 01.
Aynu soo qaadanno dhowr digaag
La animation Waxay noqon doontaa wax fudud, digaagga ayaan ka soo qaadaneynaa shaashadda dhinac ka mid ah dhanka kalena waxaan xoogaa indhahiisa siin doonnaa. Waxa ugu horreeya ayaa ah in lagu nuqulo lakabka daaqadda lakabyada, adigoo gujinaya lakabka kuna dhejinaya astaanta lakabka cusub tusaale ahaan. Magacaabista lakabka waa muhiim.
Waxaan dooran doonaa labada indhood ee digaagga ku jira lakabka Pollo 02, ka dibna waxaan dooran doonaa indhaha digaagga.
Indhaha vektorka digaagga ee lakabka kore, Pollo 02, la xushay, waxaan gujineynaa badhanka midig iyo sanduuqa wada hadalka u dhigma, waxaan raacnaa wadada Beddel-milicso.
Indhaha oo ay rogrogto
Marka gudaha xulashada Reflex, taabo ikhtiyaarka Vertical-ka oo aad dhamaysay. Hadda waxaan haysan doonnaa sawir digaag ah oo dusha sare ah indhaha hal dhinac iyo kuwa hoose mid kale.
Hada aan sii laba jibaarno digaagga
Mar labaad, si loo nuqulo lakabyada, waxaan isticmaali doonnaa badhanka Lakabka cusub ka socota liiska lakabyada. Gujinaya lakabyada Digaag01 iyo Digaag02 intaad haysato furaha wareejinta iyo jiidida dusha badhanka Lakabka cusub.
Dhowr digaag oo kale
Waa inaan dib u magacawnaa digaagga oo dhan, anagoo hubinayna inaan u raacno taxanaha qaab digaagga ay sameystaan Digaag01 iyo Digaag02 waa dhanka bidix ee Worktable-ka, oo la raacayo amarkooda tirooyinka, digaagga sameeya lakabyada Digaag03 iyo Poll04, waxay noqon doontaa midka midig, iyo wixii la mid ah, la jaan qaadaya amarka lakabyada daaqadda Lakabyada. Tani waa mid aad muhiim u ah, maxaa yeelay waa inaad ogaataa taas animation Waxay had iyo jeer ku jiri doontaa siday u kala horeeyaan, iyagoo qaadanaya lakabka koowaad oo ah qaabkii hore iyo kii u dambeeyay sidii kii ugu dambeeyay.
Marka digaagga oo dhan loo dhigo si sax ah (sida ku cad sharraxaaddii hore), waxaan gelaynaa daaqadda dhoofinta dukumiintiyada oo raacaya waddada Faylka-Dhoofinta, isla markaana halkaas, waxaan dooran doonnaa kordhinta feyl ahaan qaabka dhoofinta Jabbuuti o Flash. Halkaas, waxaan ka heli doonnaa sanduuq kale oo wadahadal ah kaas oo aan ku habeyn doonno tallaabooyinka ugu dambeeya. Iyadoo xulasho leh Aasaasi ah la doortay, waxaan dooran doonaa inaan dhoofino sida Lakabyada AI ilaa looxyada SWF iyo nooca Flash in aan dooran doono wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyay ee uu na siiyo, ee ah Adobe Flash Player 9. Waxaan sidoo kale calaamadeyn doonnaa xulashada Baaxadda Dalag ee sabuuradda. Waxay leedahay dhowr ikhtiyaar oo xiiso badan, oo aan ku falanqeyn doonno Casharro kale.
Kadibna ku calaamadee isla sanduuqa wada hadalka ikhtiyaarka Heer sare, waxaan dooran doonnaa xallinta iyo inta jeer ee sawirro aan ku dhejin doonno 15. Sida aad halkan ku arki karto waxaan dooran karnaa amarka lakabyada, taas oo, sidaan horay u sheegayba, aan u qaabeyno si animationku uga bilowdo xagga hoose (lakabka 1-aad) illaa dusha sare (lakabka ugu dambeeya) daaqadaha lakabyada ee is-dhexgalkaaga. Marka la dhoofiyo, fiiri natiijada barnaamij kasta oo fiidiyoow fiidiyoow ah.
Macluumaad dheeraad ah - Freepik, sawir bilaash ah iyo mashiinka raadinta dulinka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Casharbarka Sawirka: Sida loo sameeyo animations la Illustrator
Miyaa swf-ka ugu dambeeya loo isticmaali karaa ka dib saameynta ??
Bootstrap 2.3.2: Hagaha La Bilaabayo